Sidee loo hagaajiyaa dhibaatada shaashadda cas ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus | Androidsis
Francisco Ruiz | | Aaladaha Android, Samsung
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa nasiibka u heli kara iibsashada Samsung Galaxy S8 ama S8 Plus oo aad walwalsan tahay dhibaatada shaashadda cas Imisa ayaa la siinayaa in la hadlo maalmihii la soo dhaafay, oo aad ogtahay in sida ku cad Samsung lafteeda, tani maahan xaalad kasta oo dhibaato ama cillad qalab ah haddii aan waa dhibaato qaabeynta qaab fudud taas oo si fudud lagu xallin karo adoo galaya goobaha Android.
In kasta oo aanan taageersanayn iibsashada terminal-kan cusub ee Samsung, si kasta oo ay iigu muuqato qurux badan, iyo sida aan ku sharaxayo maqaalkan kale Anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay inay tahay waqtigii aan ku iibsan lahaa Samsung Galaxy S7 ama S7 Edge qiimo aad u wanaagsan, ka dib waan sharxayaa sababta shaashadan casaanka ah ee dahsoon ee qaar ka mid ah Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus iyo sidoo kale habka lagu xaliyo dhibaatada ka soo baxda labada terminaal.
1 Waa maxay sababta shaashadda cas ee qaar ka mid ah Samsung Galaxy S8?
2 Sida loo Hagaajiyo Samsung Galaxy S8 Dhibaatada Shaashadda Casaanka Sida uu sheegayo Samsung
Waa maxay sababta shaashadda cas ee qaar ka mid ah Samsung Galaxy S8?
Sida lagu sheegay bayaan dhowaan ay soo saartay hay'adaha caalamiga ah ee Kuuriya lafteeda, dhibaatooyinka loogu yeero shaashadaha cas ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus, Iyagu ma ahan dhibaatooyin iyaga laftooda laakiin iyagu waa muuqaal gaar ah oo ka mid ah shaashaddahan iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada 'SuperAMOLED' ee Samsung ay in muddo ahba ku sii kordheysay terminaalkeeda Android.
Marka tan "Loo malaynayaa" Dhibaatada midabka casaanka leh ee shaashadaha qaar ka mid ah Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus, Waa dhibaato ka dhacda qaabeynta shaashadda markii la dooranayo qaabka la-qabsiga, shaashad shaashad si gaar ah loogu talagalay shaashadan oo leh tikniyoolajiyadda 'SuperAMOLED', oo mas'uul ka ah inay si toos ah ula jaanqaado codka shaashadda iyadoo loo eegayo deegaanka aan ku isticmaaleyno Taleefannada casriga ah mar walba.
In kastoo Aniga shaqsiyan ahaan, ka isticmaale ahaan Samsung Galaxy S6 Edge Plus, sharraxaadan Samsung waxay umuuqataa wax yar oo laga bixi karo. maadaama Samsung aysan soo bandhigin midabka casaanka ah markii aan karti u yeesho ikhtiyaarka shaashadda la-qabsiga ee ka imanaya goobaha shaashadda, waa inaad siisaa faa iidada shakiga oo aad sugtaa si aad u aragto waxa adeegsadayaashu u maleynayaan ama uga faalloonayaan goobaha ay ku kulmeen. dhibaatadan shaashadda casaanka ah ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus qaar ka mid ah, waana in la xusuusnaado in aan ka hadlayno terminaal la iibiyay oo leh qiime bilow ah in moodelkiisa ugu fudud uu ka badan yahay 800 oo Euro oo dadweynaha laga iibinayo.
Tan waxaan uga jeedaa, qiimaha ay ku iibinayaan alaabtan tiknoolajiyadda sare ah, ma banaana qol ama waa inaan loo helin meel ay ku dhacaan guul darrooyinkan la sheegayo ama habaynta nidaamka xun.
Jaangooyooyinkan qiimayaashan qaaliga ah waa inay ku baxaan iib iyagoo ku jira xaalad joornaal kaamil ah, Ka dib markii la soo dhaafay xakameyn tayo fiican leh oo diyaar u ah in si caadi ah loo isticmaalo iyada oo aan loo baahnayn in la raadiyo oo la geliyo qaabeynta nidaamka si loo saxo waxa shaki la'aan ah qaabeyn xun ama cillad la'aan shaashadahan ay saameeyeen dhibaatada midabka casaanka ah.
Sida loo Hagaajiyo Samsung Galaxy S8 Dhibaatada Shaashadda Casaanka Sida uu sheegayo Samsung
Haddii aad nasiib leedahay ama nasiib darro tahay kiiskan, ka dib markii aad lacag fiican ku bixisay Samsung Galaxy S8 ama S8 Plus waxaad heshay tan dhibaatada shaashadda casaanka ah ee u muuqata in toos looga qaaday moolka jahannamadaNasasho ku kalsoonow sida ay Samsung lafteeda sharraxday, tani maahan wax dhibaato ah iyada lafteeda tan iyo markii lagu xalliyo gelitaanka goobaha Android, tagaya qaybta Shaashadda, qaabka shaashadda, dheelitirka midabka, iyo gab habka shaashadda la-qabsiga si loo doorto midabka shaashadda gacanta.
Haddii tan dhab ahaan loo hagaajiyo qaabkan, oo aanan shaki ka wada geli doonin maaddaama aanan u helin nasiib ama nasiib-darro in aan yeesho Samsung Galaxy S8 si aan shakhsi ahaan ugu tijaabiyo, su'aashaydu waxay tahay: Muxuu yahay qaabkan la qabsiga, ee kiiska Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus uusan si cad u shaqeynaynin?.
Waxaan ka shakisanahay taxanaha marwalbana waxaan iskudayaa xaaladaha ugu xun,iyo inbadan oo asalka Samsung ah iyo iyaga dhibaatooyinkii dhowaa y sidaa uma dhawa!, Waxaan u maleynayaa in Kuuriyadaani ay rabaan inay hal waqti oo dheeri ah na siiyaan farmaajo tanina ma aha wax ka dheer in la qariyo waxa aan shaki ku aaminsanahay iyo Waxaan sharad ku galay inay markale tahay dhibaato culus ama shit ay doonayaan inay ku qariyaan qiima kasta ha lahaadee oo naga dhigaysa inaan gacanta ku hagaajino shaashadda Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus.
Sikastaba, waad ogtahay hadii aad wax iibsaneyso, inaad ku fakartay inaad iibsato ama aad iibsatay Samsung Galaxy S8 ama S8 Plus, oo Xitaa haddii ay leedahay qaab shaashad la-qabsi ah, qaabkani waa mid aan qiimo lahayn Tan iyo markii la xalliyey dhibaatadan shaashadda casaanka ah, tan haddii Samsung Galaxy S8 aad u dhibaataysan tahay dhibaatadan, waa inaad ku hagaajisaa codadka shaashadda gacanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo hagaajiyo Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus dhibaatada shaashadda cas
Maxaa intaa ka badan, Francisco, wixii aan awood u yeeshay inaan ka akhriyo warbaahinta kale, anigoo gacanta ku xakameynaya xoojinta casaanka si loo dheelitiro heerkulka midabka ee ugu dambeeya, maaddaama subpixel kasta uu soo saaro qaddar iftiin ah oo keena wadarta, shaashadda It It luminta dhalaalka (isha !!!) waxa dhiiro galiyay, waxay umuuqataa, inay badalayaan boosteejooyinka wajiga jahwareerka la abuuray si looga fogaado dhibaatooyinka waaweyn ... Ma aqaano sababta ay sanka iiga garaacday inay tani dabada keeni doonto. Waxaan ku qanacsanahay inaadan ka daahin waxaad noo keeni doontid war arintaan ku saabsan - aan dhahno - "redgate". Salaan
Jooji wasakhda hareerahaaga! Telefoon casri ah oo cusub oo horeyba dhibaatooyin u haysteen?
Ku jawaab Ezequiel Avila
Sida wax kasta oo cusub oo soo baxa, dufcadihii ugu horreeyay marwalba waxay leeyihiin faahfaahin
Jawaab Mauro Jonay
Aynu ka taxaddarno saaxiibayaal, kan shaashadda casaanka ahi wuxuu ku dhacay HTC m7, xusuusnow dhammaadka warshadda waan aqbalayaa inay ka timid warshadda oo aan la xallin karin .. waxaan rajeynayaa inay mar dambe dhacdo ka hor inta aan la isticmaalin qalabkan .. !
Nauzet Texeira Falcon dijo
Waxaad tiri run maahan. Hagaag almost
Iftiinka guduudka ama huruudda ah ee ka soo baxa shaashadda s8 ama s8plus khalad ma leh (Waan ogahay gacanta hore maxaa yeelay waan haystaa). Sidoo kale ma ahan qaabka shaashadda «muujinta la-qabsiga», waa ikhtiyaar laga helay «set / screen / filter light buluug», hubinta doorashadan waxay shaashadda u beddeleysaa caddaan dhalaalaya. Maxaa ikhtiyaarkan loogu talagalay? Hagaag, yaree qadarka iftiinka buluuga ah si aad uga fogaato daalka indhaha.
Doorashadan sidoo kale waxay leedahay iPhone (lammaanahaygu wuxuu haystaa iPhone7s plus), sidoo kale wuxuu leeyahay shaashad hurdi ama casaan ah. Marka kuwa iibsada s8 ama s8plus u sheeg inay tahay mid Weyn, tayo cajaa'ib leh iyo dheecaan badan. Marka la soo koobo, waxba in laga hinaaso.
Jawaab Nauzet Texeira Falcón
Haye, waxaan hayaa S6 shaashaduna casaan bay noqotay. Waan curyaamiyey habka la qabsiga oo weli sidii buu ahaanayaa; Waxaan raadiyay shaandhada iftiinka buluuga ah ikhtiyaarkaasna ma laha qaabkan.
Ka waran haddii waqti ka waqti iftiinka caadiga ahi soo noqdo laakiin isla markaaba casaan noqdo, softiweerka ayaa la cusbooneysiiyay Abriil dibna uma cusbooneysiin karo.
Waxay ii xaqiijineysaa inaysan dhibaato aheyn sida taleefanka gacanta oo kale, taasi waa, inay waxyeello gaareyso laakiin shaashadda casaanka ayaan raaxo lahayn.
Maxaad ii soo jeedinaysaa? Miyaan sugi doonaa cusbooneysiin cusub ama u geynayaa adeegga farsamada? Mahadsanid
Ku jawaab Mauxi
Waxaan ka maqlay khadka cas ama madow, laakiin kuma saabsan shaashadda cas ee s6 ama s7. Waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka imaan karto cusbooneysiintii ugu dambeysay ama dhibaato software. Waxaan kugula talinayaa inaad u tagto adeegga farsamada rasmiga ah ee Samsung waxayna dib u eegaan fashilka maxaa yeelay waxay noqon kartaa cilad-joojin. Haddii aan xal u helo dhibaatada, waan kula soo socodsiin doonaa.
Fran Cerdan Peris dijo
Waxaan hayaa galaxy s8 + oo waxaan dhihi karaa ma ahan dhibaato software. Waxaan horeyba uhelay 2 soo noqosho dhibaatooyinka shaashadda casaanka ah, mana ahan intaas oo kaliya, laakiin waxaa jira meelo shaashadda ka mid ah oo leh midab midab leh, qeybta hore ee hore waxaa ku sugnaa midab bunni ah oo hoose, midkan cusubna midabka waa casaan. Waa mushkilad ka weyn sida ay u muuqato iyo baaxad weyn. Waxaan qaatay terminalkeyga si aan ula barbardhigo shaybaarada ka soo baxay Media Markt ee magaaladeyda ku taal Valencia, 7 ka mid ah 8dii terminalna waxay leeyihiin cillad casaan mid aad u weyn ama ka yar. Midka kaliya ee aan soo bandhigin cillad wuxuu ahaa S8 oo wuxuu umuuqday gebi ahaanba ka duwan, sida haddii ay soosaartay shirkad shaashad kale, kanina wuxuu umuuqday mid qumman. Sidaa darteed waxaan wajaheynaa REDGATE buuxa oo tuuraya dhamaan kontaroolada tayada ee loo maleynayo in Samsung dhulka ku heysto ka dib Fashilkii Xusuustii 7. Waxay sii wadaan inay wax aad u xun ku sameeyaan waxa ay umuuqato. Waxaan soo celin doonaa S8-kan ugu dambeeya waxaan sugi doonaa bil ama 1 si aan u arko haddii dhibaatadii la xaliyay. Nasiib wacan adiga iibsada
Ku jawaab Fran Cerdán Peris
Waad salaaman tihiin. Waad ku mahadsan tahay ka jawaabista walaacdayda. Waxaan kuu sheegayaa in imika maalinta aan shaashadda ganaaxayo, nalka ay tahay inuu noqdo; habeenkii waan arki doonaa haddii uu casaan noqdo, haddii ay sidaa tahay, markaa waa farsamo in loogu yeero sidaa darteed taleefanka gacantu waa inuu kala gartaa inuu yahay maalin iyo habeen iyo iftiinka oo uusan saameyn ku yeelan indhaha, maadaama la og yahay iftiinka Buluuga ah sida ay ugu yeeraan waa waxyeello marka la seexanayo waxayna abuureysaa daal, raaxo la'aan marka la seexanayo, iyo waxyaabo kale, laga yaabee inay taasi tahay sababta iftiinka casaan u beddelo si uu hoos ugu dhigo xoogga oo aanan indhaheenna u daalin, riyada ka qaadin, gaaban, nama saameynayo
Waan hubiyaa haddii ay igu soo dhacdo habeenkii iyo berri mar kale ayaan qoraa, inta ka horreysa tanina waxay i siisaa degganaan xagga maskaxda ah maxaa yeelay haddii ay dhibaato ka haysato taleefanka gacanta waxaan u socdaa wax hehehehe
Salaan !!! ?
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa galaxy s7 iyo 3 bilood oo la isticmaalo shaashaduna waxay isu rogtay casaan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado inay dhibaato weyn tahay
Ku jawaab Johanna glez
Waad salaaman tihiin. Runtii shaashada cas ayaa la dhigay habeenki maanta subixiina iftiinku waa caadi.
Sikastaba waxaan aadayaa adeeg farsamo si aan u waydiiyo.
Hagaag, hadaan si xun xun u bilownay, waxaan aadayaa sadaxda gees ee S7 oo ay waxyeelo ka soo gaadhay xariiqda casaanka ee shaashadda iyo Samsumg oo aad u xun fadhiistay, kii ugu dambeeyay waxay ii soo direen SMS iyaga oo sheegaya in aysan awoodin inay ila soo xiriiraan . Been iyo buurbuur, ilaa maantana weli ima ay soo wicin.
Jawaab Daniel Iglesias
Waxaan ku jiraa qormadan shaashadda casaanka ah, maxaa yeelay kombuyuutarkeyga xperia wuxuu soo bandhigayaa isla kiiskii, shaashad si goos goos ah isu beddeleysa casaan caadi ah, iyadoo aan loo eegin waqtiga maalinta.
Ku jawaab Gau